Riwaayadii Cali Mahdi maxey ku dhamaatey
Riwaayadii Cali Mahdi maxey ku dhamaatey?
Saacadba saacadda ka danbeysa waxa ay Soomaalia kusoo kordhayo markaad u fiirsato waxaad arki kartaa in ay tahay dhibaato horleh oo aad usii liidaneysa. Waxaa caadi ah marka uu qofku diloodo cudurku inuu si xawli ah uu qofka ugu fido jirkiisa oo aan la xakameyn karin taasoo markaas ay culimadu ay yiraahdaan waxba lagama qaban karo qofkan.
Farahana lagala baxo oo indhaha laga eego, tasoo dadku ay diyaariyaan halka qabriga looga dhigi lahaa, iyo sidii loo asturi lahaa, inkastoo ajashu ay wakhti leedahay.
Hadaba guuldarada Soomaalia ka dhacdey saacadihii iyo bilihii u danbeeyay gaar ahaan koonfurta Somalia waxaa aad arkeysaa in uu burburkii uu sii kordhyo saacadba saacada ka danbeysa, isagoo wajiyo kala cayncayn ah.
Inkastoo markhaati aysan u baahneyn burburka Somalia bal aan eegno Prof Cabdi Ismail Samatar oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed muxaadaro uu ku qabtey bishan Agoos 2007 dalka Sweden tasoo runtii aad dadka u baraarujisey isagoo ka waramayay burburka Soomaalia waxaa uu yiri "Soomaalia si kastaba waa u burburtey waxa noo harey oo kaliya waa Diinta iyadiina maanta ayaa loo soo dhigtey, ee aan badbadino, dalkeenana aan ka saarno masiibada ku habsatey iyo isticmaarka qabsadey".
Shirka Cali Mahdi uu ku qabtey Muqdisho ee loo soo dhiibey isagoo u adeegaya caado qaate iyo dabadhilif iyo weliba gumeysi oo kamida burburka kusii kordhey Soomaalia ayaa waxaa uu ku sifoobey kadar oo dibi dhal tasoo noqon doonto mid taariikhda geli doono. Waxaana kamida:
Iney xirmaan iskooladii shirka awgiis, iney istaagey ganacsigii shirka awgiis, iney ka qaxaan intuu shirku socdey madasha Xamar 100 000-250 000 oo qof oo u badan dad taagdaran caruur iyo hooyooyin ah shirka awgiis, inuu dhaco shirka awgii sixir barar ku yimid dhaqaalaha iyo dhirbaaxo ku noqdey shacabka qoraxda u fadhiyo inuu ka ganacsado goobo goobo moos ah, Waxaa dhaqtarada la dhigey kumaanan naafo ku noqdey dagaalada ka sacdo xamar, waxaa si dadban iyo si toos ah loo xasuuqey caruur iyo ciroolaba. Waxaa xabsiga la dhigey shirka awgiis kumaan aan waxba galabsan, waxaa la xirey masjidyo shirka awgiis, waxaa la iibgeeyay culimo iyo dad an waxba galabsan shirka awgiis, waxaa la bililiqeystey isgaarsiin, guryo iyo hanti kale ay kamid yiiin gawaari.
Intaasi marka ay ka dhaceyso Xamar gudaheedu Cali Mahdi wuxuu leeyahay waa la heshiinayaa, dhanka kale waxaa wax laga xishoodo inuu iibsado gabdho soomaaliyeed oo yaryar uu dhali karo uuna baahi kaga faaiideystey inuu yiraahdo ku niikiya horteyda iyo kumanaan dad ah isagoo uga dan leh qurxinta shirka kuwaas loo qeybinayo kunkun sh so ah oo koobi ah. Waaba hadii lasiiyee!!. (wuxuu ugu yerey kooxda maaweelada).
Mar aan waydiiyaay sarkaal sare oo aad ula socda arimaha Somalia kana mida midowga Yurub, Somalia arimaheedana lagala tashado, waxa ay u aragto shirka Cali Mahdi waxey ku jawaabtey: "Waxaan uga digney inuu shirku noqodo waxa dadka lagu marin habaabiyo isla markaana ay siyaasad kale la yimaadaan". Iyadoo hadalkeeda sii wadato wexey tiri: waxaan ku niri "Ogsoonaada dadka soo eegeyaa Muqdisho iney qaangaar yihiin".
Markii arintaas iigu jawaabeysey waxey gacmaheedu bixinayeen calaamad muujineysa rajo xumo!!.
Isku soo wada duuboo mar la waraystay Cali Mahdi kuna dhawaaqayay in shirka lasoo gabagabeynayo, ayaa wariyihii wuxuu weydiiyay: Ma u argtaa inuu shirka guuleystey: wuxuu ku jawaabey: "Haa Soomaalidii ayaa is cafisey", hadaba Cali Mahdi waxaa imtixaan ugu filan inuu markuu shirku dhamaado daawado cajaladaha laga dubey riwaayadii uu dhigayay. Teeda kalana ii weydiiya "in isaga mooyee dadka kale qaangaar yihiin, tasoo xiriir la leh haweyneyda Somalida aheyn ee garatey riwaayada Cali Mahdi meesha ay ku socoto".
Mar aan waydiiyay gar yaqaan inuu Cali Mahdi danbiyadii oo dalka ka galey hadey jiraan uu kanina uu noqon karo denbi cusub:
Waxuu iigu jawaabey isagoo buugba ka eegin: Waa khiyaano qaran, teeda kalena cidkasta oo ku naafowdey waxyaabaha shirka uu keeney sida dhaqtar awgiis loo xirey, adeeg dadweyne oo la hor istaagey, dibudhac dhaqaale, dad awgiis shirkaas loo qabqabtey intaba waxaa ay hoos imaaneysaa cida shirka qirato iney masuul ka tahay, oo hogaamineysey, mar hadeysan ku dhawaaqin iney afduub ay ahaayeen, ayna xor ahaayen. Waxaana ognahay inuu Cali Mahdi uu dalka ka dhoofey in kabadan mar intuu Riwaayada socotey, kuna soo noqdey.
Hadaba ma dhihi karnaa Riwaayadii Cali Mahdi waxay ku dhamaatey aafadaa Shacbiga Somaliyeed soo gaartey ka sakow inuu denbi maxkamad lagu soo taago noqoto. Ayna sii kordhineysa danbiyadii horey loogu heystey, denbiyo dagaal iyo sunta dalka lagu shubey iyo xasuuq dadweyne iwm.